Toerana Fandrindrana |
[Tantara fampahalalana. ] 20 Novambra, 2021 11:27
Ny andriambavilanitra malagasy nentin'i Tara Shakti teny amin'ny 'Biennale di Firenze 2021'
Efa iray volana lasa ity hetsika ity - tamin'ny 23 ka hatramin'ny 31 oktobra 2021 teo - fa varimbariana dia hadino nizara sy nitahiry azo ato.
Hetsika fampirantiana ny Zavakanto Ankehitriny (Art Contemporain) fanao ao Florence, eto Italie, isaky ny roa taona ny "Biennale di Firenze" ka tamin'ity andiany faha-XIII ity dia "Eternal Feminine | Eternal Change" no lohahevitra nentiny. Navoitra manokana ny anjara-toeran'ny vehivavy ao amin'ny fiarahamonina ka tanatin'ireo firenena 65 nandray anjara dia nanana solontena nitondra avo ny fanevantsika i Madagasikara satria hosodoko goavana be anankitelo no nentin'i Tara Shakti teny, entiny mampahalala amin'izao tontolo izao ny anjara-toeran'ny andriambavilanitra malagasy hatramin'ny andro taloha, tamin'ny faha-mpanjaka ka hatramin'izao ankehitriny izao.
Ka ny tena moa mahavita manao dia lavitra hijery ny sanganasan'ny olo-malaza toa an-dr'i Botticelli, ry Bernini, ry Raffaello, ry Michelangelo ka nahoana no tsy hihazakazaka tokoa hanotrona sy hanandratra ny an'ny tena.
Fa tsy nisekoseko ihany anefa no naleha tany fa nitondra voan-dalana ho an'ny mpiray tanindrazana ihany koa kah
[ (0) Hevitra ] | [ (0) Verindrohy (trackback) ] | [Rohy maharitra]
[Tantara fampahalalana. ] 25 Aogositra, 2021 15:54
Ny afotroa Vesuvio tamin'ny taona 79
Ny 24 aogositra 79 no daty iray tena nanamarika ny tantaran'ny volkano Vesuvio noho ny hamafin'ny fipoahany ka nandrava tanteraka ireo tanàna manodidina azy dia i Ercolano, Pompei, Stabia ary Oplontis, noho ireo ranok'afotroa sy ny karazam-bato nanarona ireto tanàna.
Ny nahafahana namantatra io daty io dia ny tahirin-tantara nosoratan'i Plinio-ilay-tanora : "Nonum kal septembres" hoy ny filazany, izany hoe 9 andro talohan'ny volana septambra. Mpisolovava sy mpahay lalàna ary mpanoratra tamin'izany fotoana izany izy, zana-drahalahin'i Plinio-ilay-antitra. Ity dadatoany ity, izay mpanoratra sy lehiben'ny komandin'ny tafika, dia isan'ireo namoy ny ainy tamin'io loza io, sempotry ny entona sy ny lavenona naparitaky ny volkano raha handeha hamonjy ny namany.
Na izany aza dia nanao fanamarihana ihany ireo mpahay tantara tatý aoriana, rehefa nanao fikarohana tao Pompei, fa mety ho ny volana oktobra no tena sarona tanteraka ilay tanàna satria ny akanjo nanaovan'ny mponina dia efa somary mafanafana fa tsy maivana kely toa ny rehefa volana aogositra.
Isan'ny volkano araha-maso tsy miato i Vesuvio na dia "mandrimandry" aza izy satria izy ihany no volkano anaty kaontinanta raha eto Eoropa (i Etna sy Stromboli dia eny amin'ny nosy avokoa) ary feno mponina manodidina azy.
Taorian'ity fipoahany tamin'ny taona 79 ity dia ny 1631 no taona nampitroatra mafy azy indray. Teny an'elanelany teny dia nifoha sy nandravarava ihany izy. Fa nisy fotoana kosa dia natory nandritra ny 300 taona. Indraindray dia mamoaka entona fotsiny izy ao anatiny ao ary tamin'ny 1944 no nipoahany farany.
sary #vesuvio1996 sy #golfodinapoli2011
[Tantara fampahalalana. ] 25 Jolay, 2021 00:36
Efa mba nanontany tena ve isika hoe inona ny antony mahatonga ny tavoahangy divay ho 75 santilitatra fa tsy 1 litatra ?
Ny tavoahangin-divay taloha dia mbola nanodidina ny 73 santilitatra teo ho eo fa efa tamin'ny taon-jato faha-19 vao nisy ireny tavoahangy 75 santilitatra ireny. Maro ny antony naroso ho nahatonga izany :
- ao ny milaza fa izay ihany ny habe tratran'ny herin'ny havokavok'ireo mpitsoka azy rehefa manamboatra ny tavohangy izy ireo.
- na koa hoe, izay ihany no fetran-divay idealy tokony sotroina rehefa misakafo.
- misy ireo manizingizina fa ny tavoahangy 75 santilitatra no fomba iray hitazonana ny hatsaran-tsiron'ny divay.
- ary ao ny mihevitra fa izay no manamora ny fitaterana.
Ny tena antony anefa dia ny anglisy no tena mpanjifa mahafatra-po ireo divay vokarin'ny frantsay. Saingy ny ahiahy tsy nihavanana satria tsy nitovy ny fatra fandrefesana frantsay sy anglisy : ny "galona imperialy" iray, mari-pandrefesana anglisy, dia mira 4,54609 litatra amin'ny frantsay.
Ka mba tsy hampisavoritaka dia nitondran'ny frantsay divay Bordeaux tao anaty barila 225 litatra, na galona 50 katroka, rizareo anglisy. Ny tanjona dia hanamora kokoa ny kajy izany ka ireo galona 50 dia mira tavoahangy 300 amin'ny 75 santilitatra. Izany hoe ny galona iray dia nitovy tamin'ny tavoahangy 6.
Ary hatramizao ny divay dia mbola amidy amin'ny tavoahangy 6 na 12 isaky ny baoritra.
[Tantara fampahalalana. ] 13 Jolay, 2021 22:44
Ny 'Sala del Conclave' tao Viterbo
Ny ​"Sala del Conclave" dia io efitrano lehibe io izay nifidianana ny ho Papa Ray Masina hitondra ny eglizy katolika romana, handimby an'i Papa Clément IV izay nodimandry ny 29 novambra 1268.
Izay no fifidianana Papa lava indrindra teo amin'ny tantara satria dia naharitra 2 taona sy 8 volana (1006 andro) ny fahabangan'ny seza fiandrianan'ny Papa. Ary izay no nitondra ny fanaovazana tamin'ny fananterahana ny Fifidianana Papa ka nahatonga ny "Conclave" fantatsika ankehitriny.
Ankoatra ny fizarazaran'ireo kardinaly nivory tao manko, satria samy nanana ny antokotokony sy ny tombotsoa arovany avy, dia nisy antony hafa ihany koa nampitarika ela ity fifidianana ity :
- 20 ny isan'ny kardinaly am-perinasa tamin'izany saingy ny iray dia tsy afaka namonjy ny fifidianana satria niondrana an'ady araka ny antson'i Louis IV hiatrehana ny silamo (croisade) ary matin'ny aretina pesta tany.
- tamin' ireo 19 nandray anjara tao indray dia nisy iray nametra-pialana noho ny fahosany sy ny fahanterany. Ary nisy kardinaly roa nodimandry nandritra ny fotoam-pifidianana.
Leo ihany ny mponin'i Viterbo noho izany fitarozahan'ny fifidianana izany satria mbola izy ireo koa no miantoka ny sakafon'ireo kardinaly. Hany ka nohidiandrizareo tao amin'io efitrano lehibe io izy ireo nanomboka tamin'ny volana mey na jona 1270. Izay no nahatonga ilay anarana hoe "Conclave" - nohidiana "cum clave", teny latina midika hoe "miaraka amin'ny lakile".
Nataon'ny mponina zay hahanoana azy ireo ka noferany ny habetsahan'ny rano fisotro sy ny sakafon'izy ireo ary nesoriny ihany koa ny tafon'ny trano mba tsy hampahazo aina ireo kardinaly.
Efa ny voalohan'ny volana septambra 1271 vao nahita marimaritra iraisana izy ireo ka i kardinaly Tebaldo Visconti no voatendry ho Papa ary Grégoire X no anarana nentiny.
Rehefa voafidy ny Papa vaovao dia mivoaka ny efitrano ireo kardinaly ary mankeo amin'io lavarangana tsara tarehy antsoina hoe "Loggia della Benedizione" io. Eo no ambara ny vahoaka hoe nahazo Papa vaovao : Habemus Papam ! Ary avy eo no hanomezany ny tso-drano.
Mba tsy hiverenan'izay intsony dia noraisina ny fanapahan-kevitra tamin'ny taona 1274 fa mitokana sy mihidy amin'ny "conclave" mandritra ny 8 andro ny kardinaly rehefa hifidy Papa ka raha tsy mahafidy amin'izay dia ahena ny sakafo sy ny rano.
[Ankapobeny ] 04 Jiona, 2021 14:29
Vaksiny ry dada, vaksinin'ny zaza... hoy ry Ny Nanahary.
Tany amin'ny taona 80' tany ho any isika nofaizin'ny bemangovitra ka nahatonga ny aingam-panahin-dr'i ry Nanahary tamin'ilay hira hoe : "Vaksiny ry dada, vaksinin'ny zaza, lesonay afak'omaly ka aoka isika samy ho faly. Fiarovana ny mpianakavy ka esory an-tsaina ny mosavy. Vaksiny tsisy vola, azo atao koa ny sola..."
Nofaizin'ny covid-19 isika atý amin'ny taona 2020 ka mbola taritintsika hatratý amin'ny 2021. Ny fanefitra hitan'ny manampahaizana tamin'izany dia ny vaksiny.. fa an'ny olon-dehibe indrindra indrindra.
Tsy voatery ho atao hoy ny Fanjakana, saingy voatery hanao ihany isika satria isan'ny pasipaoro hivoahantsika ivelan'ny firenena onenantsika izy io. Vita aloha ny tsindrona voalohany ho ahy androany, afaka roa volana sy tapany ny faharoa.
Mba tsiahivina kely ato anaty blaogy ihany koa aloha fa efa nifantoka loatra nanodidina ity aretina ratsy ity ny fanombohan'ny folo taona faharoa amin'ny taona roa arivo.
1 2 3 ... 52 53 54 Manaraka»
Powered by Lifetype. Design by WPThemes.Info Converted to use with Lifetype by James Huang. Valid XHTML and CSS